Fiaram-panjakana sy fiarana parlemantera Misy fepetra ny fahafahany mivezivezy
Anisan` ireo fiara afaka mifamezivezy amin` ireo fatitra telo vokasik` ny aretina Covid-19 ireo fiaram-panjakana sy an` ireo parlementera dia anisan` ireo fiara afaka mivezivezy malalaka amin` ireo faritra telo voakasiky ny aretina Covid-19.
Ho an` ireo fiaram-pankajana, dia tsy maintsy manana takelaka mena sy taratasy ara-dalàna. Tsy maintsy kosa manana “ordre de mission” sy karatra maha mpiasa (carte professionnelle) ireo mpandeha ao anatiny. Ho an` ireo fiaran` ireo depiote na loholona indray dia tsy maintsy misy ny “cocarde”. Tsy maintsy ao anatiny ihany koa ny parlementera (présence physique) ary tsy maintsy manana ny karatra maha mpikambana azy ao anaty parlemanta ka mampiseho izany an` ireo mpitandro filaninana izay misahana ny fifamezivezena amin` ireo lalàm-pirenena.